ဘာသာရေးသမားများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစားသုံးကြသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
2009 ကတည်းကလူကြိုက်များတဲ့ယဉ်ကျေးမှုသောစိတ်ကူးဝယ်ထားပြီး ဘာသာရေးကလူကိုပိုမိုညစ်ညမ်းလောင် (မအများကြီးအားဖြင့်) ။ သို့သော်မကြာသေးမီက Porn Hub မှအချက်အလက်များသည် Tom Stringham ၏ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြချက်အရMormons နှင့် Porn ကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း: Utah တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နံပါတ် ၄၀ တွင် New Porn Data ရှိသည်"ဒီမှာပြန်ထုတ်ပေး။
စာရင်းအင်းများကပုံပြင်များကိုပြောပြသည်၊ ၎င်းသည် Mormon များကိုကောင်းစွာသိသောအရာဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေအချိုးအစားအညွှန်းကိန်းများသည် Mormon ယဉ်ကျေးမှု၏လူမှုရေးကျန်းမာရေးကိုပြောဆိုသော်လည်းအချို့မှာမူမမှန်ပါ။ လူသိများသောဥပမာတစ်ခု - ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် လေ့လာမှုတစ်ခု ယူတာသည်အမေရိကန်ရှိမည်သည့်ပြည်နယ်တွင်မဆိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးနှုန်းရှိသည်။ Utah ၏လူအများစုကိုဖွဲ့စည်းထားသော Saints သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရှားရန်ယုံကြည်ကြောင်းဝန်ခံသည်။
သို့သော်အချက်အလက်အသစ်များအရ Utah နှင့် Mormon လူ ဦး ရေမြင့်မားသောပြည်နယ်များသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ၂၀၀၉ လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ အနိမ့် porn အသုံးပြုမှုနှုန်း။
Mormon blogosphere (သို့မဟုတ်“ Bloggernacle”) သည်မူရင်းလေ့လာမှုကိုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်စာတမ်း၏နိဂုံးများသည်အွန်လိုင်းရှိ Mormonism များအကြားလိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးထွားလာနေသောဟောပြောချက်၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်လာသည်။ အဓိကဘလော့ဂ်တော်တော်များများကဒီကိစ္စကိုခေါင်းထဲထည့်ထားသလိုပဲ ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ.
လအနည်းငယ်ပြီးနောက်, Utah porn စာရင်းဇယားသမားရိုးကျပညာ၌အမြစ်တွယ်နေပြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကိုယ်စားပြုအဖြစ်ဘလော့များ, ထိုစာရင်းဇယားကိုကိုးကားစေမည်ဟု, သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်ရေးဆွဲလျက်, ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းချက်နှင့်စွပ်စွဲချက်များကိုပေါ်ရွှေ့ ဒီမှာ, ဒီမှာ, ဒီမှာ, ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ။ ဘာသာရေးသင်ကြားမှုအချို့ကိုယုံကြည်သောမော်မန်ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလူသိများသောလေ့လာသူဂျိုအန်းဘရော့ခ်၏အမြင်များကရှက်ဖွယ်ညစ်ညမ်းသောစောင့်ကြည့်နေသောမော်မန်အကြောင်းလူသိများသောဇာတ်ကြောင်းကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုသည်။
LDS ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှူးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အန္တရာယ်များကိုအထူးသဖြင့်လူငယ်များအားအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ကိုငါတို့အားလုံးသိသည်။ ထိုအသေး, စာရင်းဇယား Utah ရှိကြောင်းပြသခဲ့ကြသည် အိမ်မှာအွန်လိုင်း porn subscription ကို၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းကို.
သို့သော်ဆန့်ကျင်နေပုံရသောဤအချက်နှစ်ချက်သည် Mormonism လောကတွင်ညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာများနှင့်အတူမလိုက်နာသောအရာတစ်ခုခုရှိနေသည်ဟုထင်ရပုံရသည်။ Mormon အသိုင်းအဝိုင်းသည်သန့်ရှင်းခြင်းကိုအလေးအနက်ထားကြသည်။ သို့သော် Mormonism's chastity ကိုအလေးထားခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာလိင်နှင့်ပတ်သက်သောခံစားချက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်၊ ရှက်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်နက်နဲခြင်း၊ [Link ကို]
ငါးနှစ် Mormonism နှင့်ညစ်ညမ်းအပေါ်စကားပြောဆိုမှုသည်ဤတစ်ခုတည်းဒေတာအချက်အားဖြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီနှင့် Brooks နဲ့တူ Mormonism ယဉ်ကျေးမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ', ပေါ်မှာအိပ်ပျော်ပါပြီ။
အဆိုပါစာတမ်း၌အိုင်ဒါဟို (၂၅% လတ်တလောသူတော်စင်များ) သည်ယူအက်စ်ရှိဘရော့ဘန်းအသုံးပြုသူတစ်ထောင်လျှင်အနိမ့်ဆုံးနှုန်းထားများမှာအနိမ့်ဆုံးနှုန်းထားများရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲသည်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်လေ့လာမှုမှာပါ ၀ င်တဲ့အချက်အလက်တွေဟာအမည်မဖော်ပြထားတဲ့ရောင်းချသူမှဖြစ်ပြီးအမေရိကန်လူ ဦး ရေရဲ့ကိုယ်စားပြုသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်၊
The New ဒေတာများ
ပြည်နယ်, Pornhub.com နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းနှစ်စဉ် Pageviews ။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကယင်း တတိယအကြီးဆုံး ယူနိုက်တက်စတိတ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာဝက်ဘ်ဆိုက် (Pornhub.com) သည်ပြည်နယ်အလိုက်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏နှစ်ပတ်လည်စာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်မှစာမျက်နှာပြမှုဇယားကိုညာဘက်တွင်ပြသထားသည် ဒီမှာ).
သက်ဆိုင်ရာလူ ဦး ရေအချိုးအစားပြောင်းလဲမှုကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြောင့် Pornhub တင်ပြသောဇယားသည်၎င်း၏သက်ဆိုင်မှုတွင်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သို့သော်နိဂုံးချုပ်သည် Mormon များအတွက်အကျိုးရှိပုံရသည်။ Utah ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၄၀ ရှိသည်။ အိုင်ဒါဟိုနှင့် ၀ ယ်မင်ပြည်နယ်များသည်ကြီးမားသော Mormonism များနေထိုင်သောပြည်နယ်များဖြစ်ပြီး ၄၉ နှင့် ၄၆ တွင်အသီးသီးရှိသည်။
ဖြစ်နိုင်ပါသဖွငျ့ variable တွေကိုများအတွက်ချိန်ညှိမယ်လို့သောအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးထက်ပိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝအနက်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ငါတစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်အဘို့ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းလတ်တလောလူဦးရေဒေတာစုဆောင်း၏ဒုက္ခထံသို့ ဝင်. , ဒါကြောင့်ငါကထိန်းချုပ်ထားဆုတ်ယုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတစ်ဦးချင်းဂျီဒီပီ, လူတစ်ဦးချင်းအင်တာနက်ထိုးဖောက်မှု, အထီး / အမျိုးသမီးအချိုးအစား, အသက်ဖြန့်ဖြူး, လူမျိုးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီပြည်နယ်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှုန်းအဘို့အ variable တွေကိုပါဝင်သည်။
သာမန် linear ဆုတ်ယုတ်နည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း, ငါပြည်နယ်၏အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးချင်းအမြင်များနှင့်လူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသောအမြင်များအကြားခြားနားချက် generated ။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းခုနှစ်, ယူဂန်ဒါ၏လူ ဦး ရေစာရင်းအရခန့်မှန်းထားသည့်အမြင်များမှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၄၅ ခု၊ Wyoming သည် ၄၆ နှစ်နှင့်အိုင်ဒါဟိုတွင် ၅၀ နေရာတွင်ရှိသည်။
တစ်နည်းပြောရရင်အခြား variable တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာ Mormon လူ ဦး ရေဟာပုံမှန်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းမှုနှုန်း (အနည်းဆုံး Pornhub ကကိုယ်စားပြုသည်) ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းယခင်ကထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောအကြံပြုချက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့အသုံးပြုမှုနှုန်းအထူးသဖြင့်နိမ့်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။
ငါသည်လည်းတိုက်ရိုက် Mormonism နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (ဒီအထူးသဖြင့်မက်ထရစ်ဖြင့်တိုင်းတာသည်နောက်တဖန်, ကဲ့သို့) အကြားဆက်ဆံရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါက 2009 လေ့လာရေးသားသူမလုပ်ခဲ့ဘူးတစ်ခုခုပါပဲ။ ငါအရာရှိတဦးက LDS အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်စာရင်းဇယားနှင့်သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးလတ်တလောလူဦးရေများဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, LDS သောပြည်နယ်၏လူဦးရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ် variable ကိုပါဝင်သည်။
ပြီးသားဖော်ပြထားသော variable တွေကိုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်အခါအဆိုပါဆုတ်ယုတ်ကြောင်း, အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တွေ့ ပြည်နယ်၏ LDS လူ ဦး ရေတွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခြင်းသည် porn သုံးစွဲမှုပမာဏ၏ခန့်မှန်းခြေ ၁၆% ခန့်လျော့ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်.
ဤရလဒ်ပင် 0.001 အဆင့်မှာအလွန်သိသာသည်။ တကယ်တော့ "လူဦးရေအတွက်အဆုံးစွန်သောနေ့သူတော်စင်များ၏ရာခိုင်နှုန်း" ငါသည် (လာမယ့်အရေးပါဆုံးသော variable ကိုအင်တာနက်ထိုးဖောက်မှုခဲ့) ကိုဆုတ်ယုတ်တွင်ထည့်သွင်းမဆိုအခြားတစ်ခုတည်း variable ကိုထက်ပိုမိုမြင့်မားစာရင်းအင်းအရေးပါမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆုတ်ယုတ်အတွက်ခြုံငုံရှင်းပြခဲ့အပြောင်းအလဲ၏အချိုးအစား 66% ဖြစ်တယ်, ခြုံငုံအရေးပါမှုအဘို့စမ်းသပ်ခန့်မှန်းအဖြစ်မော်ဒယ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနှင့်သိသာကြောင်းအကြံပြုအလွန်အပြီးသတ်သောဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ရလဒ်များကိုဤဒေတာနှစ်ခုအစုံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပေါ်လာသလဲ? အဲဒါကိုသိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်လေ့လာမှုကိုရေးသားသူကသူ့အားခရက်ဒစ်ကဒ်ဒေတာပေးသော“ ထိပ်ဆုံး ၁၀” အပြာရောင်းချသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမထုတ်ဖော်ခဲ့ပါ။ ထိုရောင်းချသူ၏အသုံးပြုသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုကိုယ်စားပြုခြင်းရှိ၊ မရှိအကဲဖြတ်ရန်နည်းလမ်းမရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည် ။ သူသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းကောက်ယူခဲ့သောသူ၏အချက်အလက်များသည်စားသုံးမှုကိုသာတိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ဘဲငွေပေးချေမှုကိုသာပေးသည်။ ကွာဟမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာ Utah ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အခကြေးငွေပေးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရားမျှတစွာပြောရလျှင် Pornhub.com သုံးစွဲသူများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသေချာပါ။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေးသူနှင့်မပေးရသောအရာများကိုထောက်ပံ့ပေးသောပေးသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။
စာရင်းအင်းများပုံပြင်များပြောပြခြင်း, နာမည်ကြီး "Utah porn စာရင်းဇယားက" ထိုက်သည်ထက် ပို. ပုံပြင်များပြောသည်။ porn နှင့်လိင်အပေါ် Mormonism သှနျသငျ၏ဝေဖန်သူများကတစ်ဦးရှေးရိုးစွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုသူ့ဟာသူအပေါ် backfired သောစိတ်ကူးမြှင့်တင်ရန်ဆက်လက်ချင်ပါတယ်လျှင်, သူတို့သည်အချက်အလက်များ၏တစ်လျော့နည်းအဆင်ပြေ set ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
အချိန်နှင့်နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကသက်သေပြနိုင်သည့်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာ - Mormons များသည်အခြားသူများထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းရှေးရိုးစွဲလိင်ဆိုင်ရာသွန်သင်ချက်များသည်အလုပ်လုပ်နေသည်။
တည်းဖြတ်ရန်: တောင်းဆိုမှုတစ်ခုအနေဖြင့်မကြာသေးမီက Gallup အချက်အလက်များကိုပြည်နယ်အလိုက်ရရှိခဲ့ပြီးပြည်နယ်၏ဘာသာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် Mormons များ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများကိုခွဲခြားနိုင်ရန်အတွက်ဘာသာရေးဘာသာတရားဆိုင်ရာပြည်နယ်များမှမကြာသေးမီကရရှိသောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်၏ဆုတ်ယုတ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ တူညီသောယေဘူယျရလဒ်များကိုဆက်ရှိနေသည်။ တစ်ပြည်နယ်၏ LDS လူဦးရေအတွက် 10 ရာခိုင်နှုန်းအမှတ်တိုး porn Pageviews အတွက်အနီးစပ်ဆုံး 17% လျော့နည်းသွားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ p-value သည်အလွန်နိမ့်သည်၊ 0.002 ။ ဘာသာတရားအပါအ ၀ င်စီမံကိန်းများမှသွေဖည်။ ၊ utah 38th, အိုင်ဒါဟို 50th နှင့် Wyoming 46th ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေကွဲပြားခြားနားမှုသေးငယ်ဖြစ်ကြပြီးငါအထက်တွင်အကြံပြုကောက်ချက်မှမအပြောင်းအလဲများကိုလိုအပ်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာမှတ်စုများ: ငါဖော်ပြထားသော Regression ဖျော်ဖြေဖို့ Stata ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှအစိုးရအရင်းအမြစ်များမှကောက်ယူခဲ့သည်။ စာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဂျီဒီပီအတွက်လော်ဂရစ်သမ် variable တွေကိုသုံးသည့်တိုင်ရလဒ်မှာတသမတ်တည်းရှိခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ဂုဏ်ထူးစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဒီဂရီအပိုင်းအစ၏ပြီးစီး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းနည်းလမ်းများသင်ယူခဲ့တယ်။ Edit: ဒေတာဖိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ Stata do-file ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ.
Mormons နှင့် Porn ကိုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း: Utah တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နံပါတ် ၄၀ တွင် New Porn Data ရှိသည်